Odeeffannoo!Imala maanguddoonni ABOfi PDO araarsina jedhanii socha'uuf jiran gufachiisufi ykn ammoo WBO fakkaatanii jaarsolii reebuun .. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOdeeffannoo!Imala maanguddoonni ABOfi PDO araarsina jedhanii socha’uuf jiran gufachiisufi ykn ammoo WBO fakkaatanii jaarsolii reebuun ..
Odeeffannoo ! Imala maanguddoonni ABOfi PDO araarsina jedhanii socha’uuf jiran gufachiisufi ykn ammoo WBO fakkaatanii jaarsolii reebuun maqaa ABO akka balleessaniif namoonni 170 WBO akka fakkaatanitti qopheeffamanii akka jiran irra gahamee jira.
Namoonni kun fannoo qawwee isaanii irratti asxaa alaabaa fi OLF jettu kan kaayameef yoo ta’u dabbasaa mataa isaa guduruu godhatuun qopheeffamanii leenjii fi waan gochuu qaban mara itti himamee xumuramee jira. Manguddoonni keenya waan kana of duratti hubadhaatii of eeggannoon socho’aa!
Milkiin dhaqaa galaa!
maddi Odaa Gurree